Home Wararka MW Trump oo Qudbadii macsalaameenta iska so duubay
MW Trump oo Qudbadii macsalaameenta iska so duubay
Saacado yar ka hor inta uusan ka dagin xilka madaxtinimada Mareykanka, ayuu madaxweyne Trump shalay galab soo saaray muuqaalki ugu danbeeyay ee uu kula hadlay taageerayaashiisa.
Trump ayaa sheegay in uu qabtay wixi uu u yimid inuu qabto iyo wax ka badan muddadi afarta sano aheyd uu hayay xilka madaxwenaha Mareykanka.
Trump oo aanan wali qiran guuldarradi doorashada, ayaa taageerayaashiisa u sheegay in dhaq-dhaqaaqiisa uu hadda un billowday.
Barqanimada maanta ayuu ka tagi doonaa Washington, ka hor inta aysan dhicin xafladda caleema-saarka madaxweynaha cusub Joe Biden.
Dhanka kale, Joe Biden oo lagu wado in maanta loo dhaariyo xilka madaxweynaha Mareykanka, ayaa shalay galab soo gaaray magaaladan Washington D.C.
Isaga oo ilmada ceshanaya ayuu Biden u sheegay dadka gobolkiisa “Inuu mar walba ahaan doono kuna faani doono wiil kasoo jeeda gobolka Delaware,”
Biden ayaa noqon doona madaxweynaha 46-aad ee uu yeesho Mareykanka. Waxaa madaxweyne ku xigeen u ah haweeneey lagu magacaabo Kamala Harris. Waxay noqon doontaa haweeneydi ugu horreysay ee loo dhaariyo xilka madaxweyne ku xigeenka Mareykanka taariikhda.